जताततै बम पड्काउने ‘विप्लव’ भागेर कहाँ पुगे ? यस्तो छ प्रहरी आशंका - Dainik Nepal
जताततै बम पड्काउने ‘विप्लव’ भागेर कहाँ पुगे ? यस्तो छ प्रहरी आशंका
दैनिक नेपाल २०७४ मंसिर २० गते १७:४४
जताततै बम पड्काउने विप्लव भागेर कहाँ पुगे ? यस्तो छ प्रहरी आशंका
काठमाडौँ, २० मंसिर। जताततै बम आतंक मच्चाउने नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई नेपाल प्रहरीले हिट लिष्टमा राखेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता मनोज न्योपानेले महासचिव विप्लव प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेको बताए । प्रहरीको निगरानीपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएका विप्लव भारत पुगेको प्रहरीको आशंका छ । देशभर बिस्फोटका घटना भइरहँदा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भने भारतमा रहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । विप्लव केही समय अगाडि कपिलवस्तु हुँदै भारत पुगेको स्रोतको दावी छ । विप्लव केही समय अगाडि स्थलमार्ग हुँदै भारत गएको जानकारी प्रहरीसँग छ । तर उनी खड्गबहादुर विश्वकर्माको गृह जिल्ला कालिकोटमा बसेको जानकारी समेत आएको छ । केही साता अगाडि विप्लव कालिकोट पुगेकाले सुचना बाझिएको छ ।
निर्वाचनमा सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता न्यौपानेले निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न दलका प्रमुख, नेता, उम्मेदवार तथा कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको आरोपमा देशभरका विभिन्न स्थानबाट ९५७ जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा नेकपाका ६०० र सिके राउत समूहका १३ जना तथा अन्य ३४४ जना छन् । नेपाल प्रहरीले निर्वाचनका देशभर रहेका प्रहरी जनशक्तिको ९० प्रतिशत जनशक्ति खटाइएको जनाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएअनुसार निर्वाचन शुरु भएदेखि अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी स्थानमा बिस्फोटन भएका छन् । बिस्फोटनमा परी सुरक्षामा खटिएका एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ । घाइते हुनेको संख्या धेरै छ ।
दिनैजसो बिस्फोटका घटना भए पनि गृह मन्त्रालय भने घटना कसले र किन गराएको भन्ने विषयमा मौन छ । यद्यपि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको भन्दै सबैलाई निर्धक्क भएर निर्वाचनमा सहभागी हुन अपील गरिरहेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले भने देशभर भएका अधिकांश बिस्फोट नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको समूहले गराएको दावी गरेको छ । विप्लव कार्याकर्ता धेरै सङख्यामा पक्राउ परे पनि केन्द्रीय तह र पार्टीका शीर्ष नेताहरु भने प्रहरीको नजरभन्दा पर नै छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्पल देखि खड्गबहादुर विक लगायतका नेता अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
वामदेव संसदलाई आवश्यक्ता छ, ल्याउन पहल गर्छुः झलनाथ खनाल
यसरी दिए प्रधानमन्त्री ओलीले कर दिवसको शुभकामना
नेवि संघ महाधिवेशन गराउन कांग्रेस केन्द्रीय समिति
विश्व बैंककोे ‘डुइङ विजनेश’ मा नेपाल तल झरेपछि सरकारको आपत्ति